Gu’ga Carabta iyo Gabbal-Dhaca Israa’iil (Qaybtii 2aad) | Somaliland.Org
Gu’ga Carabta iyo Gabbal-Dhaca Israa’iil (Qaybtii 2aad)
December 8, 2012	45 Sannadood Ka Dib, Halyayga Ururka Al-Xamaas, Khalid Mishcal Oo Caga-Dhigtay Marinka Qassa.
Faaqidaad: Xassan Cumar Hoorri.
(Jimce 07/12/2012, Marinka Qaza). Hoggaamiyaha Ururka Al-Xamaas, Khaalid Mishcal ayaa ilmadu qoysay labada dhaban iyo gadhka markii uu labada cagood la haleelay magaalada Rafxa ee Marinka Qassa. Mashcal waxaa uu ciidda hooyo ka baaday muddo 45 sannadood ah isagoo uga dheeraaday masaafuris lagu fuliyay cududda ciidamada Israa’iil oo dalkiisa ka amar-ku-taagloonayay tan iyo 1967 markaas oo weerar gar-darro ah Yahuuddu ku qabsadeen. Sidaa darted, raadka cagtiisu waxaa uu baal dahab ah ku xardhayaa waa’ cusub oo u beryay halganka dadka Falastiin, mudada dheer, ugu jireen in ay iska tuuraan heeryada gumaysiga. Sidoo kale, tallaabadan waxaa ay ka marag kacaysaa guul kale oo u soo hoyotay Gu’ga Carabta iyo awoodaha kooxaha Islaamiyiinta ee ka curtay Bariga Dhexe. Khaalid Mashcal waxaa arlada ugu danbaysay isaga oo 11 jir ah isaga oo u qaxay Suuriya. Socdaalka manta waxaa uu kaga soo boqoolay caasimadda Qadar halkaas oo fadhigiisu yahay. Safarkan taariikhiga ah waxaa u suurta geliyay Madaxweynaha dalka Masar, Mudane Maxamed Mursi isagoo u fudaydiyay in uu ka tallaabo soohdinta dalkaasi la leeyahay Falastiin. Sida muuqata iyo si ka duwan dhaqankii 30kii sannadood ee danbe, Xukuumadda Masar ee haatan, waxaa ay ka kortay in ay oggolaansho Israa’iil uga raadiso ciddi u gudbi karta Falistiin iyo ciddii loo diidan yahay. Intaas waxaa dheer, dabayaaqadii bishii tagtay Madaxweyne Mursi waxaa uu gorgoriyay heshiis xabbad-joojin ah kaasoo lagaga hortegay weeraro Yuhuuddu dhulka ah inay ku qaadaan Daanta Qassa. Qoddob ka mid ah heshiiska ayaa dhigaya in Yuhuuddu ka waantowdo weerarada joogtada ah oo ay la beegsadaan madaxda Ururka Al-Xamaas.
Socdaalkiisa gudaha Qassa, Mishcal waxaa ku gedaamnaa boqolaal ciidamada duubka madow ah ee Ururka Al-Xamaas kuwaas oo ku rarnaa qoryaha fudud, kuwa lidka dhex iyo boobayaasha lidka fog. Hoggaamiyaha waxaa xadka kaga hor tegay Madaxda Xamaas oo uu horkacayo hoggaamiyaha ururka Ismaaciil Hanniya, madaxda kooxaha kale ee Falastiin, iyo kooxo dhallinyaro agoon ah kuwaas oo walidiintood loo aanaynayo in ay ku baxeen gacanta Israa’iil. Khaalid Mishcal oo ah afhayeenka Al-Xamaas, isla markaana ah sarkaalka u qaabilsan arrimaha siyaasadda muddo dheer waxaa raadkiisa ku joogay ciidamada sirdoonka Yuhuudda. Israa’iil si weyn waxay ugu taamayeen dilkiisa iyaga oo dhowr jeer isku dayay in ay ku khaarajiyaan dalalka uu ku sugnaa. Mar uu ku sugnaa dalka Urdun, muddo laga joogo 15 sannadood waxaa uu gacata u galay hurin si gaar ah loo soo carbiyay kana socday ciidamada Israa’iil. Raggii qafaashay waxaa dhegta kaga mudeen cirbad sun ah oo aan loogu talo gelin in uu ka samoto baxo wax noole ah. Ujeedadu waxay ahayd in loo arko qof si caadi ah u geeriyooday, hase ahaatee, Allah kama uu dhigin maalintiisii waxaana uu ku badbaaday si mucjiso ah. Dilka Mishcal ee xilligaa waxaa soo amray ra’iisal wasaaraha maanta xilka haya, Benjamin Netanyahu oo markaasna isla jagadaa joogay. Hadda, Khaalid Mishcal isaga oo jooga dhulkiisii iyo isaga oo illi-ka-aragtay u maraya fadhiisimada ciidamada Israa’iil waxaa warbaahintu ka warreysatay ciddii ka danbaysay shirqoolka uu nabad-galay. Waxaa uu carrabka ku dhuftay “waxay ahayd doqoniimadii Netanyaho”, isaga oo hadalkiisa ku kaabay, “Allah ayaa ka weyn xoogga iyo dhagarta Israa’iil.”
Maanta in si nabad ah Khaalid Mashcal u dhex muushaaxo Daanta Qassa waxaa suurta-geliyay Ururka Al-Xamaas oo intii hore ka tamar weyn ka dib markii uu helay hub ay ku waxyeelayn karaan gudaha Israa’iil sida Gantaallada Al-Fajr ee lagu garaaci karo ilaa 70 kilometer. Sidoo kale, ururku isaga oo dhabarka ku haya Ururada dhiggiisa ah ee hadda ka taliya Masar, Tuunis, Turkey iyo Iran waxaa ay oggolaadeen in ay Israa’iil kala xaajoodaan danahooda. Weliba iyada oo toban maalmood ka hor Dalka Falastiin loo aqoonsaday xubin korjoogta ah oo ka tirsan, kursina ku leh Qaramada Midoobay. Aqoonsigooda waxaa aad uga dhiidhiyay Maraykan iyo Israa’iil in kastoo ay ku guuldarraysteen. Dhinaca kale, Israa’iil iyaga oo aad uga xun aqoonsiga Falastiin waxaa ay go’aan ku gaadheen in ay ilaa saddex kun oo dhisme ka fuliyaan Daanta Qassa iyo Bariga Qudus oo u qorshaysan in uu noqon doono caasimadda Falastiin. Hase ahaatee, hindisahaa cusub yuhuuddu sida ay u barteen uma ay helin cid ku taageerta.
Waxaa xusid mudan, isla markii dhawaaqo ka soo yeedhay waxaa markiiba si degdeg ah uga digay Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay, xukuumadda Maraykan iyo dalaka reer Yurub.
Sidaan hore ugu soo tibaaxnay qaybtii hore ee maqaalkan waxaa is soo tarayaa Guulaha Gu’ga Carabta iyo Gabbal-Dhaca Isaraa’iil. Post navigation
Previous PostKulan Suugaanneed ku wajahan qiimaha Waddaniyadda oo lagu qabtay HargeysaNext PostKomishanka Oo Daboolka ka qaaday Inay Dib u eegis ku samaynayaan Natiijaddii Hargeysa	Blog